शुटिङ्गमा बनेको र बिग्रिएको 'सम्बन्धहरु'
शुटिङ्गमा बनेको र बिग्रिएको ‘सम्बन्धहरु’
प्रकाशित : बुधबार, चैत २६, २०७६१०:१८
फिल्म । बलिउडकर्मीको प्रेम कसैसँग लुकेको छैन । बि-टाउनका सेलेब्स बीच हुने प्रेमले पेज थ्रीमा राम्रै स्थान पाउने गरेका छन् । फिल्ममा देखिने जोडीहरु रियल लाइफमा पनि प्रेममा पर्छन् । यद्दपी विवाहसम्म पुग्ने निकै कम छन् । अक्षय कुमार र ट्विन्कल खन्ना , अजय देवगन र काजोल , रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोण लगायतका केहि उदाहरण छन् जसले प्रेम जीवनलाई विवाहमा परिणत गरे । तर , हामी यहाँ तपाइँलाई जानकारी दिदै छौ केहि सेलिब्रेटीको जसको फिल्ममा अभिनय गर्ने क्रममा नै ‘ब्रेक-अप’ भयो ।
रनबीर कपूर र आलिया भट्ट
पछिल्लो समय बलिउडमा हिट भएको जोडीमा पर्छ , रनबीर र आलिया । रनबीरका पिता ऋषि कपूर विरामी भएर अमेरिका उपचार गराईरहदा आलिया भेट्न समेत पुगेकी थिइन् । यी दुइको विवाहको चर्चा नभएको पनि हैन तर , ऋषिको स्वास्थ्यको कारण त्यो सम्भव भएन । यी दुइले पछिल्लो समय करण जोहरको निर्माण तथा आयान मुकर्जीको निर्देशन रहेको फिल्म ब्रह्मास्त्रमा काम गरेका छन् । तर पछिल्लो समय बलिउडमा भएको गसिपलाई आधार मान्ने हो भने यी दुइको सम्बन्ध सुमधुर छैन । लगभग ‘ब्रेक-अप’ भइसकेको छ । भारतीय मिडियामा यी दुइको विवाह र ब्रेकअपको खबर बराबर आउने गरेको छ । यद्दपी रनबीर र आलियाले यस विषयमा केहि बोलेका छैनन् ।
सारा अली खान र कार्तिक आर्यन
पछिल्लो समय बलिउडमा युवा-पुस्ता माँझ निकै चर्चा भएको जोडी हो , कार्तिक र साराको जोडी । यी दुइले पछिल्लो समयसँगै अभिनय गरेको फिल्म हो ,’लभ आजकल’ । साराले एक अन्तर्वार्तामा आफुलाई कार्तिकमा क्रस रहेको बताएपछी यी दुइको सम्बन्ध अगाडी बढेको थियो । यी दुइको सम्बन्ध चर्चामा आएपछि इम्तियाज अलिले फिल्ममा अभिनय गराएका थिए । यी दुइलाई फ्यानले सार्तिक पनि भन्ने गरेका थिए । तर , पछिल्लो समय यो जोडीको सम्बन्धमा पूर्ण विराम लागेको छ । फिल्म छायाँकनकै समयमा यी दुइको सम्बन्धमा आएको दरारले ‘ब्रेक-अप’ गराएको छ ।
शाहिद कपूर र करीना कपूर
बलिउडमा हिट जोडी मध्यको एक हो शहिद र करीनाको जोडी । करिनाकै को-स्टार भएर शहिदले ‘फिदा’ मार्फत बलिउडमा डेब्यु गरे । यी दुइको जोडीले राम्रै चर्चा पायो । यो जोडीलाई आइकनिक जोडी पनि भन्न थालिएको थियो । एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नुका साथै यी दुइले केहि फिल्ममा सँगै काम पनि गरे । यद्दपी यी दुइको पनि अन्तिम फिल्म बन्यो ‘जव वि मेट’ । यहि फिल्मको छायाँकनको क्रममा यिनको सम्बन्धमा ‘ब्रेक’ लाग्यो । फिल्म त हिट भयो तर यो जोडीले आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडी बढाउँन सकेन ।
अनुष्का शर्मा र रणवीर सिंह
बलिउडमा हिट जोडीमै पर्छन् , रणवीर र अनुष्का । यी दुइले एकसाथ केहि फिल्ममा काम गरेका छन् । जसले यिनलाई नजिक ल्यायो । सुरुवाती दिनमा सँगै भएकाले यी दुइ नजिक भए । मिडियामा गसिप पनि आयो । तर , यी दुइको सम्बन्धले निरन्तरता पाउँन सकेन । भनिन्छ यी दुइको सम्बन्धले ‘दिल धड्कने दो’ मा राम्रो सुरुवात गरेको थियो । तर , अन्त्यसम्म आइपुग्दा ‘ब्रेक-अप’ मा परिणत भयो । ‘ब्रेक-अप’ त अगाडी नै भैसकेको थियो तर त्यहाँ ‘प्याच अप’ हुन सकेन । यतिबेला रणवीरले दीपिका पादुकोणसँग विवाह गरेका छन् भने अनुष्काले पनि क्रिकेटर विराट कोहलीसँग विवाह गरिन् ।
आलिया भट्ट र सिद्धार्थ मल्होत्रा
बलिउडमा एकसाथ डेब्यु गर्ने कलाकार हुन् आलिया र सिद्दार्थ । करण जोहरको निर्माण तथा निर्देशनमा तयार फिल्म ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’ मार्फत डेब्यु गर्ने क्रममा आलिया र सिद्धार्थ नजिक भए । यी दुइको प्रेमको खबरले मिडियामा राम्रै स्थान पायो । सुरुवाती दिनमा भएकाले आलिया र सिद्धार्थले पनि मिडिया ‘ह्यान्डल’ गर्न सकेनन् । जसले गर्दा यी दुइको सम्बन्ध बाहिर आयो । यी दुइको लभ लाइफ राम्रै गईरहेको थियो । तर , पछिल्लो फिल्म ‘कपूर एण्ड सन्स’ मा काम गर्ने क्रममा यी दुइको ‘ब्रेक-अप’ भयो ।
ऐश्वर्या राय र सलमान खान
बलिउडमा जब सेलेब्स प्रेमको कुरा आउछ , सलमान र ऐश्वर्याको कुरा नहुने कमै संयोग हुन्छ । बलिउडमा सलमान र ऐश्वर्याको प्रेम कसैसँग लुकेको छैन । यी दुइको प्रेम ‘हम दिल दे चुके सनम’ मार्फत सुरु भएको थियो । संजाल लीला भन्सालीको यो फिल्मबाट जोडिएको सम्बन्ध त्यसको केहि समयपछी सकियो । सलमानको बानीले गर्दा ऐश्वर्याले ‘ब्रेक-अप’ गर्नु परेको खबर मिडियामा आयो ।
अमितााभ बच्चन र रेखा
बलिउडमा अव्यक्त प्रेमको रुपमा अमिताभ र रेखाको प्रेमलाई हेरिन्छ । यी दुइले केहि फिल्ममा सँगै काम गरेका छन् , जसले प्रेम पलायो । यी दुइले मिडियामा प्रेम स्वीकारेका छैनन् तर बि-टाउनमा यिनको प्रेमको चर्चा धेरे भएको थियो । यी दुइले अन्तिम समयमा ‘शिलशिला’ मा काम गरेका थिए । यो फिल्मको छायाँकनको समयमा अमिताभ र रेखाको सम्बन्धमा ब्रेक लागेको भारतीय मिडियामा उल्लेखित छ । त्यसपछि अमिताभ घरजम गरे तर , रेखा अझै अविवाहित छिन् । (एजेन्सी)
दश वर्षमा आमिरको दुई फिल्म फ्लप !
मलेसियामा यसरि हुँदैछ ‘धुर्मुस–सुन्तली साँझ’
ड्रग्समा जोडिन सक्छिन् दीपिका ?
विजयलाई बलिउड डेब्युको लागि ४८ करोड ?
मन्त्री बाँस्कोटाको चेतावनी–‘१८० दिन आफ्नै देशको फिल्म नचलाउने हलमा ताला लाग्छ’
कस्तो छ ‘साहो’ रिभ्यु ?
दोश्रो मिस्टर एन्ड मिस रौनियार हुँदै
हलमा नयाँ फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’
अन्तर बैंक एटिएम शुल्क २० रुपैयाँ
माघेसंक्रान्ति पर्व मनाइँदै
‘मोडल हन्ट नेपाल’को खुल्यो आवेदन
सातौं तीज म्यूजिक अवार्डसँगै चौथो काठमाण्डौं सर्टफिल्म फेष्टा सम्पन्न
ताप्सी र कृतिले छाडेको फिल्ममा कार्तिक